Akafongora ndokuisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee!
Akafongora ndokuisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee ichitsvedza kupinda mubeche
Nyika inonzi South Africa yakaipa varume, vana vacho vanoita kuti mboro imire nekuwona yellow bone kunge uchazvitundira usina kusvira. Ndakayenda kuJozi ndiri student hangu pane imwe college inonzi Damelin yainge iri kuBramely.
Most of the time ndaigara hangu keeping busy nemabooks as the first year student ndaida kuti ndipase ndiratidze vabereki kuti havasi kutambisa mari yavo.
Ndakapasa with distinctions zvekuti kana allowance yakabva yawedzerwa nababa, little did I know kuti room-mate yangu aigara achiyenda pane kamwe kaClub kari along Louis Botha kemumwe muNigerian.
Mumwe musi ndakati tiri paweekend hedu rega ndimboyendawo kunofara ko ndainge ndakuyenda 2nd year apa chikoro ndichigona, ndakati ndichingosvika paclub iya haa mhani vasikana ivavo here mboro yamira yorara yomira yorara futi, ndakazoona wangu chaiye,yellow-bone , mazamu mahombe kuzoti garo racho ndakapotsa ndatunda nekunakirwa ndega.
Ndakazviudza kuti extra allowance yese inoperera muzvidya zvake
Pasina chinguva ndakafamba ndichiyenda paari ndichibva ndamumhoresa ahh wanike ahh mhani chirungu chacho kuita kunge ndasvika america chaiyo, kuzoti ko unonzi ani, ndinzwe “Rutendo” iwe ndakabva ndati ha iwewe watova wangu achibva aseka hake.Zvakabva zvaita easy kani kutaura so, ndakamuti manje inini ndiri student iwe unogara kupi, zvikanzi just around the corner, why wabvunza. Chokwadi ndainge ndavanechikara and ndainzwa kuda kusvira kana kusvirwa musi uyu.
Ndakatanga kutenga hanzi guarana cider apo inini ndainwa coca cola straight ko ndainge ndiri mwana wamufundisi asi panoti beche ndipo pandainge ndakanyorwa. Ndakatanga kupuruzira zvidya so zvakatsvukirira tiri mubhawa imomo ndikawona munhu akungozvongonyoka zvikanzi Tinashe usadaro kani unozosvigona here zvauri kudenha.Ndakamuti handei pamba pako tione kuti zvinofamba sei, imi kaimi ndaifamba ndichigumwa gumwa mboro nemagaro road yese kusvikira tasvika kumba kwake.
Pakazovhurwa door munhu ainge atofongora inini ndokutoisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee apo kutsvedza kwacho beche rainge ratota kudhara, ndakatanga kukoira munhu akamira so akabatirira pacorner yesofa,akaizvomora ndokubva azvikanda pacouch ndokuvhura beche rese zvekuti ndaiwona mukati maro, ndakatanga kukoira so ndapfeka ka ultra thin-condom zvekuti ndaipota ndichiburitsa mborondotarisa coz ndainzwa kunge ndisina kupfeka anything. Beche rainaka iroro zvekuti mazuva ano ndakusvira weekend yega yegakana kuClub hatichayende.
Akafongora ndokuisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee ichitsvedza kupinda mubeche. Nyika inonzi South Africa yakaipa varume!
Updated: August 5, 2020 — 5:43 pm
Tags: Akafongora ndokuisa bhurugwa paside ndokuiti pfeee ichitsvedza kupinda mubeche
Kusvirwa Nyoro naKiller ndabva Botswana
Kukwirwa neMuzukuru murume wangu aripo tirimutruck kubva Joni!
Kusvira Nyasha nepafenzi
Kusvira kamwana KaLandlord kamuform Six
Musoja ane mazimhata kunaka!